संविधान दिव’सबारे बोल्दा प्रह’रीले नागरिकलाई लखेटी ल’खेटी कु’ट्यो,आखिर के हुँदैछ?(भिडियोसहित) – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
संविधान दिव’सबारे बोल्दा प्रह’रीले नागरिकलाई लखेटी ल’खेटी कु’ट्यो,आखिर के हुँदैछ?(भिडियोसहित)
२ असो’ज, काठ’माडौं । शुक्र’बार दिउँसो न’याँ बानेश्वरस्थित संस’द भवन’नजिकै सड’कमा व’सन्त पौडेल श्री’मतीसँग हिँडि’रहेका थि’ए । उनी श्रीम’तीलाई अ’स्पतालमा जँ’चाएर निवा’सतर्फ फर्कँदै थि’ए ।
सं’विधान दिव’सको पू”र्वसन्धामा आ’म नागरिक’हरुको प्रति’क्रिया लि’ने उद्देश्य’ले हामी बस’न्तको छे’उमा पुग्यौं र केही प्रति’क्रिया दिन आ’ग्रह गर्‍यौं ।
संवि’धानले हा’मीलाई के दियो ? भ’न्नेबारे पौ’डेलले बता’उँदै थि’ए । अचा’नक प्रह’रीले धा’वा बोल्यो र उन’लाई निकै प’रसम्म ल’खेटेर कुट’पिट गर्‍यो । प्र’हरीले अ’वराेध गरेका कारण हा’मीले कुट’पिटको दृ’श्य खि’च्न स’केनाैं ।
संवि’धानले जन’तालाई ज’ति राह’त दि’नुपर्ने त्यति हुन नसकेको पौ’डेलले बताउँदै ग’र्दा प्रहरी निरीक्षक डिल्लीराज सापकोटाको ने’तृत्वमा आएको टो’लीले पौडेललाई बोल्न निषेध गरे । प्रहरीले संसद भवन अ’गाडि नै नागरिकको अ’भिव्यक्ति स्वतन्त्रता’माथि धा’वा बोले ।
अनला’इनखबरकर्मीलाई प’नि प्रह’रीले दु’र्व्यहार गरे । गि’रफ्तार गरेर गा’डीमा हा’ल्न खो’जे पनि प्रति’वाद गरेपछि इ’न्स्पेक्टर साप’कोटाले प’क्राउ चाहिँ ग’रेनन् ।
प्रह’री टो’लीले सू’चना वि’भागको का’र्ड देखाउँदासमेत अन्तर्वार्ता दिइरहेका पौ’डेललाई ला’ठी हा’नेर अन्तर्वार्ता बि’थोलेका थिए । पर पुगिसकेपछि प’नि उनी’माथि प्रहरीले लखेट्दै ग’एर कु’टपिट गर्‍यो ।
प्र’हरीले पि’टेर खे’दाइसकेपछि हामी फेरि पौडेलको सम्पर्कमा पुग्यौं । उनले यसरी बा’टो हिँडि’रहेका सर्वसाधारण नागरिकमाथि प्रहरीले कुटपिट गर्नु गैरसंवैधानिक ए’वं गैर’कानूनी का’र्य भए’को बताउँदै दो’षीमाथि कार’वाही हुनु’पर्ने बताए ।
काठ’माडौं प्रहरी प्रमुख एस’एसपी श्याम ज्ञवा’लीले घट’नाबारे छानविन ग’र्ने जना’एका छन् । महा’नगरीय प्र’हरी कार्यालय, रानी’पोखरीका डीआ’ईजी विश्वराज पोखरेलले पनि घ’टनाको छा’नविन गर्ने बताएका छन् ।
य’सअघि बिहीबार प’नि बानेश्वर प्रहरी कार्या’लयका इन्स्पेक्टर के’शर न्यौपाने ने’तृत्वको टो’लीले बबर’महलमा १०० ग्रु’पका युवा अ’भियन्ता बब्लु गुप्तालाई रगतपच्छे हुने गरी कुटपिट गरेको थियो । न्यौ’पानेसहितका प्रहरी अधिकारीमाथि छा’नविन गर्न प्रहरी प्र’धान कार्यालय, नक्सालले रा’नीपोखरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनलाइनखबरको टोली सं’विधान दिव’सबारे जनमत लिन बानेश्वर चो’कतर्फ गइरहेका बे’ला शंख’मुलतर्फ जाने सडकमा ब’सेका प्रहरीले रोक्न खोजेको थिए ।
यो घटनाले सडकमा पत्र’कार र क्यामेराम्यान देख्नासाथ आक्रमण गरी हाल्ने प्र’हरीको नियत प्रष्टै देखिएको छ । बोल्न पाउनुपर्ने ना’गरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रहरीले गरेको य’स्तो व्यव’हारप्रति अनलाइनखबर खेद व्यक्त गर्दछ । यसरी नाग’रिकहरुमाथि कु’टपिट गर्ने निरंकुश व्य’वहार त’त्काल ब’न्द गर्न स’रकारसँग आग्रह गर्दछ ।
यो समाचार अन्लाईन खबरबाट लिईएको हो।
Previous उर्जादेव कुलमान घिसिङले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस,३ करोड जनताको मनै रु’नेछ,पूरा पढ्नुहोस।
58 mins ago Mechi Mahakali